Maitiro ekumanikidza iyo system kukumbira iyo password yekutenga muMacApp Chitoro | Ndinobva mac
Maitiro ekumanikidza iyo system kukumbira iyo password yekutenga muMacApp Chitoro
Nezuro takakuudza zvawaifanira kuita kuchengetedza zvese izvo zvechitatu-bato kunyorera zvaive zvichikwanisa kuwana maContact ako mukati meiyo macOS system.
Iyo Apple system, kunyangwe iri yakachengeteka iripo, iine mamwe ma nuances atinofanira kuzvigadzirisa pachedu neruoko. Nhasi ndinodzoka neimwe dosi yekuchengetedza, mune ino kesi, zvine chekuita nenguva yazvinotora kuti system ikumbire iyo Apple ID password yekutenga kubva kuMac App Store mushure mekupinda mairi kekutanga.
Kazhinji inguva dzatinorega komputa yedu ishandiswe nemumwe munhu uye zviri chaizvo munguva idzodzo dzatinofanira kujekesa nezve kuchengetedzeka kwemidziyo yedu uye zvitupa zvedu zvinofanirwa kunge zviri padanho repamusoro. Iwe unofanirwa kuziva izvo, kana isu tikangodzvanya pane Mac App Store kune imwe kutenga uye nekuisa password yeiyo Apple ID, zvinoenderana nemabatiro atakaita sarudzo iyi, iyo system haizotibvunze isu password zvakare mune imwe nguva, saka kutenga kunogona kuitwa pasina mvumo yedu.
Neichi chikonzero, isu tinotenda zvakakodzera kuti iwe uverenge yakati wandei mitsara mune ino chinyorwa uye gadzirisa chengetedzo yeako macOS kuitira kuti ikubvunze iwe password munguva yaunofunga yakakodzera kana kuti inongokumbira iwe pese paunoenda kutenga.
Maitiro ekugadzirisa chiitiko ichi akapusa uye iwe unofanirwa kuwana chete Sarudzo dzeSystem> Kuvanzika uye chengetedzo> Dzvanya pane inokiya> Pinda password kuvhura> Yepamberi. Paunodzvanya pane Yepamberi bhatani ... iwe uchaona kuti hwindo diki rinoratidzwa mauri uine sarudzo yekumisikidza zvinhu zviviri chete:
Zvekuti system ikumbire password nguva dzese paunotenga muMac App Store, zvichave zvakakwana kusiya yekutanga sarudzo isina kusarudzwa. Kana iwe uchida kunyoresa nguva kuti irege kukubvunza iwe password kusvikira nguva iyoyo yapfuura, unofanira kusarudza sarudzo uye wozosarudza nguva.
Vazhinji venyu makamboshamisika kuti sei paine nguva apo inogara ichitibvunza isu password uye pane dzimwe nguva isu tinopinda mairi kamwe uye inoshumirana akateedzana nguva. Chinokosha chiri mune zvatakakuratidza kare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Maitiro ekumanikidza iyo system kukumbira iyo password yekutenga muMacApp Chitoro
Nzvimbo yekokorodzano ichaitirwa WWDC inotanga kushongedzwa
Tambo nyowani dzeNike's Apple Watch dzave kutotengeswa pawebhusaiti yayo